Ka shaqeynta in la sameeyo guri ammaan ah, oo la awoodi karo oo ay wada wadaagi karaan
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Housing
Bulshooyinka firfircoon waxay taageeraan ganacsiyada guuleysta iyo dadka isku filan. Gobolka Washington waxaa ka go'an inay aragto guryo ammaan ah, hufan, oo jaban oo loogu talagalay dhammaan dadka deggan. Waaxda Ganacsi waxay siisaa dawladaha hoose, ururada aan macaash doonka ahayn iyo wakaaladaha waxqabadka bulshada qalab si loo hubiyo in qof walba la dejiyo beeshooda.
Taageeradayadu waxay u dhaxeysaa maalgelinta raasumaalka si loo dhiso loona ilaaliyo keydka guryaha ee la awoodi karo illaa barnaamijyada ka hor istaagaya qoysaska inay noqdaan hoylaawe.
Sanduuqa Washington ee Sanduuqa Amaanada Guriyeynta
Bulshooyinka ku nool gobolkeenna lama socon karaan baahida loo qabo guryo la awoodi karo. Waxaa jira farqi sii kordhaya oo u dhexeeya dakhliga iyo kirada. Laga soo bilaabo 1986, Sanduuqa Amaanada Guriyeynta wuxuu ka caawiyey maamullada maxalliga ah iyo kuwa aan macaash doonka ahayn inay bixiyaan ikhtiyaarro ay ku daboolaan baahiyaha aasaasiga ah ee kumanaan qof iyo qoysas dakhligoodu hooseeyo.
Sanadka 2016, waxaan u dabaaldegeynaa 30 sano sanduuqa Sanduuqa Guriyeynta Gobolka Washington. Akhri wax ku saabsan shaqadeena ku jirta Warbixinta 2016 (PDF).
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sanduuqa Amaanada Guriyeynta
Barnaamijyada Guri La'aanta
Hoyga waa baahi aasaasi ah oo bina aadamku qabo. Haddii aan la helin meel ammaan ah, meel hufan oo lagu noolaado, dadka halganka ugu jira inay noolaadaan waxay leeyihiin rajo yar oo ah inay la xiriiraan adeegyo iyo fursado wax looga qabto baahiyaha jir ahaaneed iyo maskaxeed, iskuul aadaan, shaqo helaan ama helaan carruur iyo qoys kale xubnaha. Guryaha xasilloon waxay taageeraan dariiqa loo maro isku-filnaanshaha.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijyada guri la'aanta ah
Xaaladaha badankood Wasaaradda Ganacsigu ma bixiso kaalmo toos ah oo dadweyne. Waxaan maalgelinaa wakaalado kale iyo ururo aan faa'iido doon ahayn oo ka tirsan bulshadaada kuwaas oo ku caawin kara. Waa kuwan qaar ka mid ah ilaha badanaa la codsado:
Caawinta la wareegida
Xirnaashaha Guryaha Guurguura
Caawinta Sharciga Kuleylka
Kaalmada kirada ee ku meelgaarka ah
Guriyeynta Shaqaalaha Beeraha (website)
Iskuxiraha Barnaamijka iyo Kheyraadka
Guddiga La-talinta Guryaha ee La Awoodi Karo
Warbixinta Sannadlaha ah ee HTF - WBARS
Kooxda Shaqada ee Kala Duwanaanshaha Guryaha
Caawinta dib u dejinta guriga ee mobilada
Haddii aad ku nooshahay beero ku dhow Washington State oo aad leedahay mobilkaaga ama gurigaaga la soo saaray, waxaad u-qalmi kartaa kaalmada dib-u-dejinta. Caawinta dib-u-dejinta guryaha ee guurguura iyo kuwa la soo saaray ayaa la siiyaa qoysaska dakhligoodu hooseeyo ee ugu horreeya marka ugu horreysa ee loo adeego, iyada oo mudnaanta la siinayo dadka deggan jardiinooyinka u xiran sababo la xiriira welwelka caafimaadka iyo amniga ama khayaanada milkiilayaasha baarkinka.
Cimiladayntu waxay ku darsaneysaa dahaadh, daboolida dildilaaca, iyo sameynta isbadalo kale oo yareynaya kuleylka, waxay kuu keydineysaa lacag biilasha kuleylka oo gurigaaga ama gurigaaga ka dhig mid caafimaad qaba. Dowladda federaalka iyo Gobolka Washington waxay u fidiyaan barnaamijyo cimilo-weeyn, oo ay maamusho Ganacsi, qoysaska dakhligoodu hooseeyo ee aqoonta leh.
Wasaaradda Ganacsiga ayaa nidaamisa shahaadeynta, aqoonsiga, fulinta iyo u hogaansanaanta shirkadaha iyo shaqsiyaadka si ay u adeegsadaan hababka shaqada badbaadada-badbaadada leh marka ay ka shaqeynayaan guryaha ka hor 1978 ama tas-hiilaadka cunuggu degan yahay.